Kobo Libra H2O, ihe niile gbasara eReaders nke ị ga-agụ ebe ọ bụla ị gara | Akụkọ akụrụngwa
Kobo Libra H2O, ihe niile gbasara eReaders nke ị ga-agụ ebe ọ bụla ị na-aga
Karim Hmeidan | | ndị na-agụ akwụkwọ
Ka anyị laghachi afọ 2006, afọ nke ha mere mpụta nke izizi eReaders, ngwaọrụ ndị ahụ anyị nwere ike iji were otutu ngwa guru otutu puku akwukwo n’ebe obula. Ma ọ bụ na ọ dị mkpa ka ọnụọgụ teknụzụ na ụwa ọgụgụ dị mkpa mgbe anyị hụrụ otu ngbanwe ahụ n'ahịa egwu na vidiyo na ngwaọrụ ndị nyere anyị ohere iri ọdịnaya dijitalụ. Sony bụ otu n'ime ndị mbụ na-awụli elu na bandwagon, mana n'oge na-adịghị anya anyị malitere ịhụ ụdị niile na-eso otu.
Ink Electronic nọ ebe a iji nọrọ, ink nke mere ka anyị gụọ na-enweghị ike gwụrụ anyị anya na nke mere ka ngwaọrụ nwee nnukwu nnwere onwe. Na taa anyị chọrọ iwetara gị Kobo ọhụrụ ahụ ohuru Kobo Libra H2O eReader. Ngwaọrụ ọhụrụ site na ọbá akwụkwọ nke Japanese Rakuten nke anyị nwere ike ịgụ ebe ọ bụla anyị na-aga n’enweghị egwu na ngwaọrụ ahụ na-agba mmiri. Anyi anwaala ya ma anyi agwala gi na o ruru ya. Mgbe ima elu anyị nyere gị nkọwa niile ...
1 Kobo Libra H2O, eReader na-enweghị mmiri na-eweghachite bọtịnụ anụ ahụ
2 Bugharịa n'ime akwụkwọ na-enweghị ida otu eri
3 White, agba agba nke eReaders
4 Akwụkwọ ma ọ bụ isiokwu kachasị amasị gị maka akpa
5 Kobo, ọbá akwụkwọ ọfụma nke sitere na ụwa nkịtị
6 Zụta Kobo Libra H2O ọhụrụ
Kobo Libra H2O, eReader na-enweghị mmiri na-eweghachite bọtịnụ anụ ahụ
Kobo Libra H2O nwere a nchekwa nchekwa ruru akwụkwọ 6000, ha niile dabere nha ha, ihe karịrị ikike zuru ezu ọmụmụ na-egosi na nkezi anyị nwere ike gụọ na ndụ anyị nkezi nke n’etiti akwụkwọ 2000 na 4000 na ndụ anyị niile.
Themụaka nọ na Kobo chọrọ ịbawanye ihuenyo nke Kobo Aura H2O, ma ha nwere. Kobo Libra H2O biara na 7 anụ ọhịa ahụ, Ihuenyo zuru oke iji gụọ akwụkwọ ntanetị niile anyị chọrọ. Dị ka anyị na-agwa gị, ọ bụ impermeable. Ọ dị mma, ịkwesighi ịbanye na ọdọ mmiri iji gụọ, mana nke bụ eziokwu bụ na nchebe megide mmiri na-adọrọ mmasị na gburugburu ebe ngwaọrụ nwere ike ịmị mmiri. Enwere m ike icheta oge mgbe anyị na-agụ akwụkwọ n’èzí ma ụfọdụ mmiri mmiri na-amalite ịda, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị nọ na gburugburu ọdọ mmiri ma ọ bụ osimiri.
Imewe gbanwere ma e jiri ya tụnyere Kobo Aura H2O, ma weta a imewe yiri nnọọ na Kobo Forma, eReader nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ eziokwu na ọ nweghị atụmatụ na-enweghị ntụpọ, Kobo Libra H2O, na-eweta otu igodo ahu di na Kobo Forma nke gha enyere anyi aka igbanye ihu, ma ọ bụ laghachi na nke gara aga, n'ụzọ dị mfe karịa imetụ ihuenyo mmetụ aka (ntụgharị ntụgharị uche na mkpebi nke 300 PPI) nke ngwaọrụ ahụ. Nke a bụ ihe masịrị m nke ukwuu ebe ọ bụ na m na-anwale ndị ọzọ eReaders bụ ihe m na-efu n'ihi etu esi emetụ aka. A na ihuenyo na ụzọ nwere a kemeghi n'ihu ìhè nke na-ọbụna on a sepia ụda nke mere na anya anyi adighi agwu ike na gburugburu oku di ala.
Bugharịa n'ime akwụkwọ na-enweghị ida otu eri
La Ngwaọrụ UX, akụrụngwa ọ na-agagharị, dị mma, na-enweghị ezi ọ bụ eziokwu na ị nwere ike imeziwanye oge niile. Vingmegharị na ihuenyo ihuenyo rotates, ihe-akpali nnọọ mmasị ọ bụ ezie Kobo kwesiri ka oza azịza ọ na-enye ntakịrị. Otu ihe ahụ mere na mmekọrịta nke menus, ọ na-arụ ọrụ nke ọma mana echere m na iji mmelite femụwe ọ ga-akawanye mma.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ a Kobo Libra H2O bụ ụzọ ọhụrụ nke igodo na ntanetị ịgụ. Enwere akwụkwọ ndị na-enweghị mmalite na ngwụcha, ma ọ bụ karịa, nke na-enye gị ohere ịgbanwe usoro ọgụgụ maka na ntụle nke ibe ndị gara aga ma ọ bụ n'ọdịnihu nwere ike ịdị mma. Maka nke a, Kobo Libra H2O -egosi anyị usoro iheomume nke anyị nwere ike ịnyagharịa site na akwụkwọ, anyị nwere ike ime ka na- 3 jumps na akwụkwọ wee laghachi n’ebe anyi no. Ihe bara ezigbo uru na akwụkwọ ụfọdụ nke masịrị m.
White, agba agba nke eReaders
Ọhụrụ Kobo Libra H2O anyị nwere ike nweta ya na oji na ọcha, agba nke ha na-agwa anyị agbapụtala site na ụdị ochie site na ọchịchọ a ma ama. Ma ọ bụ na ọ bụghị ihe niile ga-abụ oji ... A na agba ngwaọrụ na anyị nwere ike ikpokọta ya na nhọrọ anọ nke Ihe na-ekpuchi ụra, ma ọ bụ ngwaọrụ na-ekpuchi na nwa, isi awọ, pink, na aqua-acha anụnụ anụnụ (agba zuru oke maka Kobo Libra H2O ọcha).
Akwụkwọ ma ọ bụ isiokwu kachasị amasị gị maka akpa
Anyị na-achọ ịgụ, mana ọ bụghị naanị akwụkwọ ... Anyị bi n'ụwa oriri, na ọtụtụ blọọgụ ma ọ bụ mgbasa ozi anyị na-agụ n'ụbọchị anyị kwa ụbọchị na Kobo Libra H2O bụ ngwaọrụ zuru oke iji rie ụdị ihe ndị a.
Ekele diri gi mwekota na akpa, naanị anyị ga-echekwa edemede ọ bụla anyị hụrụ na kọmputa anyị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka na ọrụ ndepụta ndepụta a ma ama, mgbe ahụ, a ga-ebudata ya na Kobo Libra H2O anyị ma anyị ga-ahụ ụdị isiokwu dị mfe na enweghị mgbasa ozi ọ bụla na-enye anyị nsogbu. Ihe ndị a niile nwere uru ọgụgụ nke eReader na-enye anyị.
Kobo, ọbá akwụkwọ ọfụma nke sitere na ụwa nkịtị
Dị ka aha ya na-egosi, Kobo Libra H2O a sitere na ezinụlọ Kobo, ụlọ ahịa akwụkwọ n'ịntanetị nke sitere na ụlọ ahịa akwụkwọ anụ ahụ nke Canada onye maara etu esi eme mgbanwe na ụwa nke mebere. Ihe ruru akwụkwọ 6000 na akwụkwọ ọdịyo bụ ihe anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa Kobo, ọnụ ọgụgụ dị asọmpi na-enweghị isi n'amaghị ihe onye isi gị na-asọmpi nwere ebe ọ na-enyeghị data na ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ha nwere.
Otu n'ime ihe kacha masị m banyere Kobo bụ nke ahụ ha na-enye ndị edemede ọhụrụ ohere, ma ọ bụ nke ọhụụ, iji bipụta onwe ha eBooks gị n’enweghị onye bipụtara ya. Businessdị azụmahịa ọhụrụ nke na-eme ka ọ dị mfe ma dị mfe ịkọ akụkọ ma mee ka ha mara.
Zụta Kobo Libra H2O ọhụrụ
Ị nwere ike nweta Kobo Libra H2o ohuru a site na isi ere ahia nke Rakuten Kobo na Spain, Fnac, ma ọ bụ na weebụsaịtị Kobo. Taa etinyela ya n'ahịa maka ọnụahịa nke 179,99 euro, ọnụahịa ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere onye ibe ya (nke nwere otu njirimara) nke nnukwu ahịa n'ịntanetị, Amazon Kindle Oasis, bụ asọmpi ebe ọ bụ na 70 euro dị ala.
Yabụ ugbu a ị maara, anyị na-akwado ya? ee. Ọ bụ ezigbo ngwaọrụ iji gụọ akwụkwọ kachasị amasị anyị ebe ọ bụla anyị gara? ee. Ọ bụrụ na ị na-achọ eReader nke ị nwere ike ịgụ na ọdọ mmiri, n'ụsọ osimiri, akwa, ma ọ bụ na ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ, Koko Libra H2O bụ ezigbo eReader gị.
Etinyela mkpuchi mkpuchi na ọnụahịa ahụ
Plastic nwere ike ịta ahụhụ site na enwere ike ịda
The software nwere ike mma
Waterproof na submersible
Bọtịnụ anụ ahụ laghachi na ahịa eReader aka
New navigation mode na ọgụgụ interface
Nyochaa: Karim Hmeidan
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Kobo Libra H2O, ihe niile gbasara eReaders nke ị ga-agụ ebe ọ bụla ị na-aga
Acer weputara uzo ohuru nke laptọọpụ Chromebook na IFA 2019
Etu esi ewepu onyonyo site na vidiyo na YouTube